Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! मनाइयो इदुल फित्र
ग्लोबल संवाददाता मंगलबार, वैशाख २०, २०७९, १६:२४:००
काठमाडौं । अरबी पात्रो हिजरी संवत्अनुसार दशौँ महिना (सौवाल) को पहिलो दिन आज देशभरका मुस्लिम समुदायले नमाज पाठ गर्नाका साथै ठूलाबडाबाट आशीर्वाद लिएर इदुल फित्र पर्व मनाएका छन् । दशौँ महिनाको पहिलो दिन नमाज पाठ सकेपछि तीन दिनसम्म आफ्ना मान्यजनबाट आशीर्वाद लिइन्छ । यसपर्वमा आफूभन्दा सानालाई आशिर्वाद दिने र आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवई, खजुरलगायत मीठा खानेकुरा खान दिने चलन छ ।
घरभन्दा टाढा–टाढा भई फर्कन नभ्याउनेले पनि मान्यजनबाट आशिर्वाद लिन्छन् । खुसीपूर्वक दान गरेर दीनदुःखी एवं गरिबलाई बाँडिने भएकाले यो पर्वलाई इदुल फित्र भनिएको हो । अरबी पात्रो अनुसार नवौँ महिनाको अन्तिम दिन चन्द्रमा देखिएपछि इदुल फित्र मनाउने कार्यक्रम तय हुने भए पनि यसवर्ष उक्त दिन आइतबार बेलुकी चन्द्रमा नदेखिएकाले आज यो पर्व मनाइएको हो । अरबी पात्रो अनुसार कुनै पनि महिना ३१ दिनको नहुँने भएकाले सोमबार बेलुकी अर्थात् ३०औँ दिन चन्द्रमा नदेखिए पनि त्यसपछिको दिनलाई १०औँ महिना मानिन्छ ।
यसैकारण आज इद उल फित्र पर्व मनाइएको नेपाली जामे मस्जिदका सचिव मन्सुर हुसेनले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यो पर्वको अर्को उल्लेखनीय पक्ष दीनदुःखी र गरिबलाई दान दिनु हो । यस पर्वमा मुस्लिम धर्मावलम्बीले एक वर्षभित्रको बचतको साढे दुई प्रतिशत नगद वा जिन्सी दान गर्नुपर्ने विधान धर्मग्रन्थ कुरानमा उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष निर्दोष अलिले बताउनुभयो । यसरी दान गरिएको नगद वा जिन्सी दीनदुःखी एवं गरिबलाई बाँडिन्छ । जसलाई जकात भनिन्छ ।
इदउल फित्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो गच्छेअनुसार गहुँ वा सो बराबरको नगद दान गर्छन् । जसलाई सत्कार फितर भनिन्छ । यो दान आमाको पेटमा आएको बच्चाको नाममा पनि गरिनुपर्छ भन्ने नियम मुस्लिम ग्रन्थमा उल्लेख छ । यो दान पनि दीनदुःखी र गरिबलाई नै दिइन्छ । यसवर्ष (गत चैत २० गतेदेखि) मुस्लिम समुदायको एक महिना लामो व्रत (रोजा) सुरु गरिएको थियो । एक वर्षभित्र गरेका पाप कटाउन रमजानसमेत भनिने यो व्रत गरिने उहाँले बताउनुभयो । एक महिनासम्म दिनभर व्रत बसेर साँझ सूर्यास्तपछि नमाज पाठ गरिन्छ । बिहान सूर्योदय अघि र बेलुकी सूर्यास्तपछि मात्र मुस्लिम समुदायले नवौँ रमजान महीनामा भोजन गर्नेे परम्परा छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २०, २०७९, १६:२४:००
शनिबार, जेठ ७, २०७९, १०:४५:०० स्थानीय सरकारको पहिलो निर्णय : स्वास्थ्य बीमामा छुटदेखि निःशुल्क बिजुलीसम्म
बिहीबार, जेठ ५, २०७९, २०:३९:०० तमुधिं नेपालले ३७ औं स्थापना दिवस मनायो
शुक्रबार, वैशाख ३०, २०७९, ०९:५६:०० भोट हालेर फर्कने क्रममा मृत्यु
बिहीबार, वैशाख २९, २०७९, ०८:५९:०० मतदान गर्न तीन दिन पैदल !
मंगलबार, वैशाख २७, २०७९, ११:०८:०० स्वर्ण पदक विजेता भारात्तोलन खेलाडी सन्जु मृत फेला
मंगलबार, वैशाख २७, २०७९, ०७:५६:०० रोल्पामा माओवादी र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप, कांग्रेसका २ जना घाइते